#CODE-Ikhosi yeNkqubo yokuYazisa-iGeofumadas
Funda ukuqhuba inkqubo, iziseko ezisisiseko zenkqubo, ukuhamba kunye neepseudocode, ucwangciso ukusuka ekuqaleni
Yazi indlela yokufaka iinkqubo ekhompyuter
Faka inkqubo ye-PseInt (Kukho isifundo esichaza ukuba siyenze njani)
Faka inkqubo ye-DFD ukuyila i-flowcharts (Kukho isifundo esikhethekileyo esichaza indlela yokwenza ngayo)
Ikhompyuter ukwenza zonke iinkqubo.
Funda iziseko zenkqubo kunye noku intshayelelo abo bafuna ukufunda ukuqala ekuqaleni izingqi ezisisiseko zenkqubo kwaye bazisebenzise.
Kule khosi ye Intshayelelo yenkqubo Uya kuyazi ke le Isiseko seNkqubo Uya kufunda ukwenza iiMizobo yokuHamba kunye neePseudocode ngendlela esisiseko negqibeleleyo.
✔ Fikelela iwebhusayithi yam.
Olunye uvavanyo lwabafundi bethu esele belufundile:
UJuan de Souza -> 5 Iinkwenkwezi
Ikhosi egqibeleleyo kwabo bangekabinonxibelelwano nalunye nohlelo. Ukufunda lo mxholo ngaphambi kokuba ufundele kwinkqubo kuya kwenza ubomi bakho bube lula kakhulu. Ngethemba lokuba ndiyifumene le khosi kunyaka ophelileyo. Olu lwazi kuphela kwekhosi yohlelo efundisa nge-pseudocode kunye ne-flowcharts endizifumeneyo. Kulungile kakhulu
U-Eliane Yamila Masuí Bautista-> 5 Iinkwenkwezi
Amava ebengcono kuba iinkcazo zichazwe kakuhle kwaye zichazwe ngumcebisi. Impumelelo!
UJesus Ariel Parra Vega -> 5 Iinkwenkwezi
Ndiyifumene ilungile !!
Utitshala uveza ngokucacileyo nangokucacileyo, izimvo ezisisiseko kwinkqubo. Ukongeza, ifundisa ngendlela yokusebenzisa iinkqubo ezimbini ezivumela ukufunda ngendlela yokuzifundisa ngakumbi. Cacisa iikhonsepthi kwaye unike imizekelo yazo usebenzisa izixhobo ezichazwe ekuqaleni kwekhosi.
ISantiago Beiró -> 4.5 Iinkwenkwezi
Kucace gca ukuba uchaze kwaye udlulise ulwazi. Ndincoma ikhosi.
UAlicia Ilundain Etchandy -> 1.5 Iinkwenkwezi
Kubonakala kubi kakhulu ukuba ndiqhubeka ndongeza izinto ukuze rhoqo xa ndibuyela kwiwebhusayithi ye-Udemy ibonakale kum ukuba ndisenezinto ekufuneka ndizigcwalisile.
Uya kuzazi zonke iziseko, ukuba funda ukuqhuba, Ngolwazi olufumanayo kule khosi, uya kuba neziseko eziyimfuneko zokuqonda naluphi na ulwimi lwenkqubo olufunayo.
Ngexesha lekhosi, ukuzilolonga kuya kuphuhliswa kwi Ipseudocode y I-Flowchart
Isifundo sahlulwe saba ngamacandelo aliqela:
Ukukhetha izakhiwo zealgorithmic
Ukuphindaphindwa kwezakhiwo zeAlgorithmic
Amalungiselelo kunye neMatriki
Y maninzi amacandelo aya kongezwa ekhosini rhoqo ukuba awulindi ixesha elide kwaye ukuba awonelisekanga yimali yakho iyabuyiselwa.
Kujolise kuyo ikhosi:
Bonke abantu abanqwenela ukufunda ukucwangcisa
Abafundi abaqala kwihlabathi lenkqubo
Iinkqubo Zabafundi boNjineli
Abafundi abanqwenela ukufunda kwiziseko ezithile de bakwazi ukubalasela ngokwenkqubo yokuziqhelanisa neekhonkco.
Iphepha elilahlayo: Le khosi yaqala yenzelwe uluntu lwaseSpain. Ukuphendula isicelo sabasebenzisi abathetha isiNgesi, ngomgangatho wasemgangathweni kunye nokuba luncedo, sibeka ixesha kule nguqulo. Umsindo kunye neenkcazo zikwisiNgesi, nangona ubukho besoftware esetyenzisiweyo kunye nezinye izicatshulwa zemodeli yokuziqhelanisa nazo zagcinwa ngeSpanish ukuze zingalahli ukusebenza.
Post edlulileyo«Ngaphambilini #GIS - QGIS 3 inyathelo nenyathelo ukusuka ekuqaleni
Post Next #LANDELWA - Ikhosi ye-3D ye-Civil kwimisebenzi yaseburhulumenteni- Inqanaba loku-4Okulandelayo »